तपाईको गोप्य कुरा यस्ता ५ प्रकारका व्यक्तिलाई कहिल्यै नबताउँनुहोस्
महाभारत जीवन प्रबर्धनका थुप्रै सुत्रको स्रोत रहेको मानिन्छ । जीवन प्रवर्धनका यी सुत्रहरु आज पनि उत्तिकै उपयोगी छन् । महाभारतको तीर्थयात्रा पर्वमा यी ६ प्रकारका व्यक्तिसँग कहिल्यै आफ्नो गोप्य कुरा बताउँन नहुने बताएको छ । जसले हामीलाई संकटमा पार्न सक्छ । स्त्री शास्त्रअनुसार, स्त्रीहरुको स्वाभाव चञ्चल हुन्छ । धेरैजसो स्त्रीहरु भन्न नहुने कुरा पनि भनिदिन्छन्, […]
हाम्रो शरीरसम्बन्धी केहि रोचक तथ्यहरु थाहा पाउनुहोस्
हाम्रो शरीरमा अनेकौं रहस्यहरू लुकेर बसेका छन् । हामीलाई त्यस्ता रहस्याका बारेमा पत्तै छैन । काँचो लसुन खानुभयो भने खुट्टामा तागत आउँछ । रक्सीको ह्यांगओभर हटाउन मह अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ । गर्मीमा तपाईको शरीरले करीब तीन ग्यालन पसिना बगाउँछ । संसारमा १०० मध्ये पाँच बच्चालाई रक्तचापको समस्या छ । देखेको र सुनेको हरेक कुरा हाम्रो […]
भनिन्छ जो हाँस्छ उहि बढी बाँच्छ । चिकित्सकबाट नै प्रमाणित कुरा हो हास्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । हाँसो भनेको एक प्रकारको औषधि नै जसका धेरै फाइदा छन् । समान्यतया: व्यक्ति अनुसार, हाँसो पनि फरक फरक हुन्छ । कोही हाँस्दा मुसुक्क मुस्कुराउँछन् भने कोही दिल खोलेर हाँस्छन् । समुन्द्र शास्त्र अनुसार, व्यक्तिको हाँस्ने शैलीका आधारमा […]
यी राशिका महिला विवाह पछि श्रीमानको घरमा राज गर्छन्
शास्त्रका अनुसार यी राशि भएका महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको खासै कुरा नसुन्ने आफ्नै मर्जी चलाउने, दाम, साम, दण्डभेदको समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । घर परिवारमा हुने हरेक प्रकारको निर्णयमा पनि आफ्नै राज गर्ने अरूको कुरा नसुन्ने र देखावटी गर्न मन पार्ने भएका कारण यस राशि भएका महिलाहरू अरूलाई देखाउनको लागि भएता पनि काम भने गर्ने गर्दछन् […]
चाणक्य नीति अनुसार यी २ गल्ती गर्ने पुरुषको चाडै नै पतन हुन्छ
चाणक्य नीतिको १२ औँ अध्यायको १६ औँ श्लोकमा २ गल्तीहरुको बारेमा बताइएको छ । जुन गल्ती गरे कुनै पनि मानिसको जीवन पुर्ण रुपले पतन हुन्छ । चाणक्य नीतिमा आचार्य कौटिल्यले भनेका छन्, ‘हरेक मानिसहरु यी २ गल्तीबाट बच्नुपर्छ । जो मानिस बिना सोच- बिचार र थोरै समयको सुखको पछि लागेर कुनै पनि काम गर्छ, ती […]
मानिसको मृत्युपछि पनि नमर्ने यी दुई चिज
मरेपछि मानिसको शरीर के हुन्छ ? धड्कन रोकिन्छ, रगत चिसो हुन्छ र अरु अंगहरू कक्रक्क पर्न थाल्दछ तर नङ्ग र कपाल भने बढिरहन्छ– कमसेकम हामीलाई यस्तै कुराहरू सुन्दै आएका छौँ । एरिक मारिया रेमरक्युको उपन्यास ‘अल क्वाइट अफ द वेस्टर्न फ्रंट’ का युवा कथावाचकले कल्पना गर्छन् कि गैंगरीनको कारणले मृत्यु भएको उनको एउटा साथीको नङ्ग […]
आइन्स्टाइनका दुई सामान्य नोटको मूल्य १८ लाख
सन् १९२२ सम्ममा ४३ वर्षीय वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन विश्वकै सबैभन्दा प्रख्यात जिवीत भौतिकशास्त्रिको रुपमा परिचित भइसकेका थिए । त्यस वर्ष आइन्स्टाइन एउटा जापानी प्रकाशकको निमन्त्रणामा लेक्चरहरु दिन जापान पुगे । युरोपबाट जापान जाँदै गर्दा उनलाई १९२१ को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिने कुरा उनले थाहा पाए । सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्रमा उनले पुर्याएको योगदान र विशेषत फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको […]
एयरफोन धेरै लगाउँदा निम्तेला है बहिरोपन
आजकाल किशोरकिशोरीहरु कानमा एयरफोन लगाएर हिडिरहेका देखिन्छन् । पकेटमा मोबाइल या आइपड, कानमा एयरफोन फेसनजस्तै चलेको छ । तर, संगितको यो आनन्द जीवनभरका लागि सजाय बन्न सक्छ भन्ने कुराचाहिँ कसैले पनि ख्याल गरेको देखिँदैंन । एयरफोनको आवाजले बहिरोपन निम्त्याउन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । ठूलो आवाजका साथ एयरफोन सुन्दा कानको पर्दामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरुको […]
वास्तुशास्त्रका अनुसार यस कारण निषेध छ घरमा क्याकटस रोप्न
वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा क्याकटस रोप्न निषेध गरिन्छ किनभने यसबारे निष्कासन हुने नकारात्मक शक्तिले तपाईं र तपाईंको परिवारलाई प्रभावित गर्छ । यसको अशुभ प्रभावले व्यापार, व्यवसाय, जागिरमा रोकावट आउँछ र भाग्यले साथ दिँदैन । तर यदि क्याकटस घरभन्दा ५० मिटर वा त्योभन्दा टाढा छ र दक्षिण–पश्चिम दिशामा छ भने यसले तपाईंको सफलताको मार्ग प्रशस्त गर्छ । […]
परिवार नियोजनको अस्थायी साधनमध्य एक हो कण्डम । यसको प्रयोगले यौनजन्य रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ । विशेषगरी युवापुस्ताले यौनसम्पर्कको बेला यसको प्रयोग गर्ने गर्छन् । नेपालमा स्वास्थ्य चौकीहरुमा कण्डम निशुल्क पाइन्छ । तर, अधिकांश मानिसहरु कण्डमलाई सेक्सको समयमा मात्र प्रयोग गर्छन् । सेक्सबाहेक कण्डम धेरै कामका लागि प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई कण्डमको उपयोगिताबारे […]
यस्तो पनि हुँदो रहेछ, सेक्स गुरु, जसले घरमै आएर यौनक्रिडा गर्ने तालीम दिन्छन्
तपाइँले पाककला, सिलाइ बुनाई लगायतका विभिन्न सीप सिकाउने तालीमका बारेमा सुन्नुभएकै छ । घरमै आएर पढाउने होम ट्युसनका बारेमा पनि जान्नुभएकै छ । तर के घरमै आएर यौनक्रिडा गर्न सिकाउने तालीम पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभएको छ ? सायद छैन होला । तर केन्नेथ प्ले नामका एक पुरुषले घरमै आएर सेक्स गर्न सिकाउँछन् । […]
संसारकै सबैभन्दा महँगो साइकल, जसको मूल्य ४१ लाख
सवारी साधनहरुमा साइकल सर्वसुलभ तथा सामान्यतया सस्तो साधन मानिन्छ । साइकलको मूल्य बुझ्दा एक लाख वा ५ लाख नै भन्यो भने सामान्यतया हामी अचम्ममा पर्छौँ तर आज संसारकै सबैभन्दा महँगो साइकलको बारे बताउन चाहन्छौँ । संसारकै सबैभन्दा महँगो साइकलको मूल्य ४० हजार डलर अर्थात ४१ लाख २८ हजार भन्दा पनि बढी रहेको बताइएको छ । […]
ज्यूँदो मान्छेलाई रक्सी खुवाएर चिहानमा पुर्ने अनौठो संस्कार
विश्वमा अनेक परम्परा छन् र ती मध्ये केही परम्परा डरलाग्दा तथा अनौठा छन् । त्यस्तै डरलाग्दो परम्परा मध्ये एउटा परम्परा क्युबामा प्रचलित छ, जहाँ मानिसलाई ज्यूँदै जमिनमा गाडिन्छ । यो प्रथा क्यूबामा बुजी अर्थात् रक्सी पर्वको नामले प्रचलित छ । यो पर्वको दौरान ज्यूँदो मानिसलाई जमिनको चिहानमा पूरिन्छ। जस अनुसार मानिसलाई काठको बाकसमा बन्द गरिन्छ […]
कस्तो अनौठो मन्दिर जहाँ बाँदरलाई पिलाइन्छ रक्सी
संसारमा धेरै मन्दिरहरु छन् । हरेक मन्दिरमा विभिन्न कहानीहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । यस्तै कहानी जोडिएको एक मन्दिर भारतमा छ । त्यो मन्दिरमा भगवानलाई फूलपाती होइन, बाँदरलाई रक्सी खुवाउने गरिन्छ । त्यो मन्दिरमा आउने भक्तजनको मान्यता यो छ की बाँदरलाई रक्सी पिलाउनाले मनकामना पूर्ण हुन्छ । बाँदरलाई रक्सी पिलाउने यो स्थान हो ‘खबीस बाबाको समाधी’ […]
हिँड्दा आखिर किन हल्लिन्छ त हाम्रो हात ?
हामी दैनिक यात्रा गरिरहेका हुन्छौं । यात्राको क्रममा हिंड्दा विचार गर्नु भएको छ या छैन ? छैन भने हिँडिरहेको मानिसलाई हेर्नुहोस्, दायाँ खुट्टा अगाडि बढ्दा बायाँ हात अगाडि जान्छ र बायाँ खुट्टा अगाडि बढ्दा दायाँ हात अगाडि जान्छ । यो कुरा हामी आफ्नै हिँडाइमा पनि याद गरिरहेका हुन्छौँ । र, बालबालिकाहरूलाई विद्यालयहरूमा ‘लेफ्ट–राइट’ भनेर यसरी […]
निन्द्रामा देखिने सपनाहरूले मानिसको भविष्यको संकेत समेत गर्ने गर्छ । ज्योतिषहरू सपनाहरू र सपना देखेको समयलाई विचार गरेर सपनाका फलहरू फरक फरक हुने बताउँछन् । सपनाको प्रभाव मानिसको जीवनमा पर्ने गर्छ भन्ने विश्वास छ । सपनामा देखिने दृश्यहरूले थुप्रै सांकेतिक अर्थ दिन्छ । यहाँ यस्तै सपनाहरु र यसका फलका बारेमा जानकारी दिइएको छ । अनार […]
नाकको एउटा प्वालले ट्युबमा हावा भरेर विश्व रेकर्ड कायम
टायरमा मुखबाट हावा भर्नका लागि हाम्रो शरिरमा अर्को दुईवटा फोक्सोको आवश्यक पर्ला तर एक चीनियाँ नागरिकले एकैपटक १२ वटा ट्युबमा हावा भरेका छन्, त्यो पनि नाकको एउटा प्वालले । यी व्यक्तिको अचम्मको कलाले उनलाई विश्व रेकर्डको उपाधि दिलाएको छ । चीनको नान्जियाङ ग्रान्ड क्यान्योनमा आयोजित एक कार्यक्रममा ४३ वर्षे ताङ्ग फेहुले दुई मिनेट ३० सेकेन्डभित्र […]
यदि हामी ज्योतिष शास्त्रलाई मान्ने हो भने हाम्रो शरिरको विभिन्न अंगहरुले तपाईको सोच तथा बानिहरु थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै हत्केलामा भएका बिभिन्न रेखाहरुले पनि व्यक्तिको बारेमा बताइरहेको हुन्छ । यस्तै कुरालाई बिश्वास गर्ने व्यक्तिहरु विभिन्न ठाउँमा हेराउन गइरहेको देख्न पाउँछौ । कसैले यस्ताकुराहरुलाई वाइयात हो भनेपनि बिश्वमा विकशित मुलुकहरुमा पनि यस्ता कुराहरुलाई विश्वास गरेको […]
धर्मशास्त्रअनुसार स्त्रीले गर्नु हुन्न यी काम
नरिवल फुटाउनुः धार्मिक मान्यता अनुसार महिलाले नरिवल फुटाउनु शुभ मानिँदैन । यसका लागि पुरुषले मात्र नरिवल फुटाउनु पर्ने शास्त्रको भनाइ छ । मन्दिरमा नरिवल फुटाउँदा महिला नभएर पुरुषले मात्र फुटाउने गरिन्छ । जनै लगाउने : महिलालाई जनै लगाउन नहुने शास्त्रको भनाइ छ । यज्ञोपवित पनि भनिने जनै पुरुषले मात्र धारण गर्न सक्छन् । बलि चडाउनेः […]
रुद्राक्ष सक्कली कि नक्कली चिन्न लगाउनुहोस् यो उपाय
धार्मिक आस्थाका रूपमा रहेको रूद्राक्षले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तै, रूद्राक्षलाई आयुर्वेदिक औषधीमा समेत निकै उपयोगी हुने गर्छ । महाशिवरात्रीको दिनमा आफ्नो राशि अनुसार धारणीय रूद्राक्ष धारण गरेमा फलिफाप हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ । धार्मिक शास्त्रअनुसार रुद्राक्ष भगवान शिवको आशु मानिन्छ । भगवान शिव आफ्नो मनलाई बशमा राखेर संसारको कल्याणको […]